देशभरी नै कोरोना भयानक बनेको भन्दै बिहीवारदेखि फेरि १ महिना लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णय ! – Dainiksamchar
HomeNewsदेशभरी नै कोरोना भयानक बनेको भन्दै बिहीवारदेखि फेरि १ महिना लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णय !
November 19, 2020 admin News 7229
देशमा कोरोना फेरि भयावह बनेको भन्दै भोलि बिहीवार देखि १ महिना पुरै लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णय । पूरा विवरण सहित । कार्तिक १९ । बेलायतले दोस्रो पटक बन्दीबन्दीको घोषणा गरेको छ ।बेलायतले स्वास्थ्य तथा नैतिक संकट रोक्न भन्दै दोस्रो राष्ट्रव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको छ । पछिल्लो निर्णय जारी गर्दै प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले क्रिसमस ‘निकै फरक’ हुन सक्ने बताएका छन् । महामारी नियन्त्रणका लागि उठाइएको कदमका कारण उक्त पर्वका अवसरमा परिवारका सदस्यहरूबीच भेट हुन सक्ने वातावरण निर्माण हुने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री जोन्सनले रेष्टुराँ, व्यायामशाला र अति आवश्यक सेवामा नपर्ने पसल सबै चार हप्ताका लागि बन्द गरिने बताएका छन् । तर यसअघिको लकडाउनमा बन्द गरिएका विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई यस पटक खुला रहन सक्नेगरी निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
October 11, 2020 admin News 1159
काठमाडौँ । आज साताको पहिलो दिन अर्थात आइतबार पनि सुनको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। आज प्रतितोला ८ सय रुपैयाँले बढेर सुन प्रतितोला ९५ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
October 2, 2020 admin News 607
कञ्चनपुर : राँगाको मासु खाँदा भीमदत्त नगरपालिका–१३ सोनापुर टोलका १४ जनाबि’रामी परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमरबहादुर थापाका अनुसार वडा नम्बर १२ का बंगला चदाराले काटेको राँगाको मासु खाँदा १४ जना
आज पनि नसोचेकै घट्यो सुनको मुल्य ब्यापारीहरु सबै मारमा हेर्नुहोस् कति छ आज सुनचाँदीको भाउ ?
October 3, 2020 admin News 720
काठमाडौँ– आज सुनचाँदीको भाउ स्थिर रहको छ । आज छापावाल सुन प्रतितोला ९३ हजार ३ सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । हिंजो पनि यही मूल्यमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै
LEX 18 agenda conversation: Job club (121677)
digital tendencies live recently welcomed Lauren abettor (113582)
Hello world! (113256)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (112014)
मेरो परिवार म बचाउछु, तँ आफ्नो लाज बचा सरकार ! (पूरा पढ्नुहोस) (75680)
कार्तिक १ गते देखि पुरा एक महिना लक् डाउन गर्ने (51006)
खोला तर्दै गर्दा बगेका २ सन्तान र आमालाई यी बालकले बचाए, समाचार बन्यो विश्वभर भाइरल…हेर्नुहोस् । (50545)
बाबुरामलाई नेकपाले भन्यो – ओली र प्रचण्डले घुष लिएको प्रमाण भए देखाऊ, नभए क्षमा माग्नु…अब के गर्लान् त बाबुराम ? (47055)
कम्मरबाट पेस्तोल निकाल्न नपाउँदै असई गोविन्दको ह’त्या भएको प्रहरी निष्कर्ष (38579)